Ciraaq waxay ogolaatay inay Kuwait Airways siiso $300 milyan
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Newsletter » Ciraaq waxay ogolaatay inay Kuwait Airways siiso $300 milyan
Baqdaad (Caasimada Online) – Dowlada Ciraaq ayaa sheegtay inay bixin doonto 300 oo milyan oo dollar oo magdhow ah Kuwait Airways Corp.
Afhayeenka xukuumadda Ali al-Dabbagh ayaa sheegay in golaha xukuumadda Ciraaq "ay ansixiyeen heshiis kama dambays ah oo dhammaystiran" Axaddii.
Wuxuu sheegay in wasaaradda cadaaladda Ciraaq ay maamuli doonto lacagaha.
Laakiin afhayeen u hadlay shirkadda diyaaradaha ee Kuwaiti ee ay dawladdu leedahay ayaa sheegay in lacag-bixintan aysan macnaheedu ahayn heshiis "ugu dambeeya". Adel Bourisli ayaa Isniintii sheegay in wadarta guud ee shirkadu ay tahay $1.3 bilyan oo ay ku jirto ribada.
Sheegashadan ayaa qeyb ka ah dadaalka Kuwait ay ku dooneyso in Ciraaq ay ku bixiso magta duulaankii 1990-kii ee horseeday dagaalkii Khaliijka 1991-kii. Kuwait Airways ayaa dalbatay magdhow diyaaraddii iyo qalabkii laga xaday intii uu socday duulaanka Ciraaq.
Faransiiska ayaa indhaha ku haya qorshaha kicinta diyaaradda
Bartlett ayaa uga digay dadka ka ganacsada daroogada ee caasimadda dalxiiska